लेखकहरूलाई अनुरोध | प्रेरक संसार
प्रिय लेखक मित्रहरू, कृपया, रचनाहरू पठाउदा सफा, सुद्ध र प्रष्ट रूपमा नेपाली यूनिकोड अथवा प्रिती फन्टमा टाइप गरि पठाउनुहोला । रचना सकेसम्...
प्रिय लेखक मित्रहरू,
कृपया, रचनाहरू पठाउदा सफा, सुद्ध र प्रष्ट रूपमा नेपाली यूनिकोड अथवा प्रिती फन्टमा टाइप गरि पठाउनुहोला । रचना सकेसम्म १०० शब्द भन्दा कम र ५०० शब्द भन्दा बढी नहुनु उपयुक्त हुनेछ । मल्टिमिडीया सामाग्री सँगै पठाउनु परेमा इमेलको प्रयोग गर्नुहोला । साथै तपाई स्वयंद्वारा लिखित रचना भएको खण्डमा आफ्नो एक प्रति फोटो पनि समावेस गरेको खण्डमा राम्रो हुनेछ । आफ्नो ठेगाना उल्लेख गर्दा नाम, थर, जन्मस्थान, अस्थाइ/स्थाइ बासस्थान, इमेल र फोन नं. उपलब्ध गराउनुहोला । विषय वा प्रसंगभन्दा बाहिरका, अनाधिकृत रूपमा चोरी गरिएका, सर्वाधिकारको उलंघन गरिएका, पूर्णरूपमा स्रोत नखुलेको, सत्य-तथ्य नभएको अथवा भ्रम सृजना गर्ने, कुनै जाती, व्यक्ति, समुदाय प्रती आक्षेप नलगाइएको, गैर नेपाली भषामा लेखिएको सामाग्रीहरू अस्विकार्य छन् । यसर्थ यस्ता सामाग्री पठाउने कष्ट नगर्नुहोला । आफूलाई उपयुक्त लागेका दोश्रो व्यक्तिको सक्कल वा अनूदित/सम्पादित सामाग्रीहरू पठाउनु परे दोश्रो पक्षको आवश्यक विवरण पनि खुलाउनुपर्नेछ । यस्ता सामाग्री प्रेषण गर्नुपूर्व सर्वाधिकार (copyright) को पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ । यसको जिम्मेवार हामी वहन गर्न सक्नेछैनौ । पुरस्कारका सम्बन्धमा हामी विजेता व्यक्ति द्वारा उपलब्ध गराइएको मोवाइल नम्वरमा रिचार्ज सेवा मार्फत रकम उपलब्ध गराइनेछ । प्रकाशन योग्य रचनाका कसीहरूको बारेमा जान्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । वा कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । धन्यवाद !
प्रेरक संसार: लेखकहरूलाई अनुरोध